१२० वर्षका वृद्ध भन्छन् – यौन सम्बन्ध नराखेकाले धेरै बाँचे ! – Deshko News
Home » विचित्र दुंनिया » १२० वर्षका वृद्ध भन्छन् – यौन सम्बन्ध नराखेकाले धेरै बाँचे !
१२० वर्षका वृद्ध भन्छन् – यौन सम्बन्ध नराखेकाले धेरै बाँचे !
स्वामी शिवानन्दको पासपोर्ट अनुसार उनको जन्म सन् १८९६ अगस्ट ८ तारिखमा भएको हो । यदि त्यो साचो हो भने उनले तीन फरक शताब्दी देखिसकेका छन् ।
उनी अझै दैनिक योग गर्ने गर्छन् । उनी स्वस्थ छन् । आफ्नो भनाई पुष्टी गर्नका लागि उनी अहिले गिनिज वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने तयारीमा छन् ।
अहिले यो रेकर्ड जापानका १ सय १६ वर्षका रिजोमोन किमुराको नाममा छ । भारत बनारसका शिवानन्द एकदमै गरिब परिवारमा जन्मिएका हुन् । उनी पछि पुजारी बने । उनी आफ्नो लामो आयुको श्रेय योग, अनुशासन र अविवाहित जीवनलाई दिन्छन् ।
‘म एकदम सादा र अनुशासित जीवन बाँचिरहेको छु, सबै उमालेका खानेकुरा मात्र खान्छु, तेल र तारेका खानेकुरा खाँदिन’ उनले भने । यतिसम्म की उनी दूध र फलफूलसमेत खाँदैनन् ।
उनी ६ वर्षको हुँदा उनका आमाबुवा बितेका थिए । उनका आफन्तले उनलाई एक गुरुको आश्रयमा छाडिदिए । उनी आफू चर्चित हुनका लागि वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन लागेको नभई अरुले आफूबाट केही सिक्न सकुन् भन्ने चाहेको बताउँछन् ।
‘म चाहन्छु मानिस हाँसी खुसी स्वस्थ रहुन्’ उनले भने ।